चाेरी गर्ने बाजे, कारबाही भोग्नुपर्ने नातिले ! – आफ्नो समाचार
चाेरी गर्ने बाजे, कारबाही भोग्नुपर्ने नातिले !
Afno News — ११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०९:२१0comment
भक्तपुर । घरमा टेलिभिजन, फ्रिज, पंखा, हिटरजस्ता बढी बिजुली खपत गर्ने सामान प्रयोग भइरहे पनि मिटरमा कम खपत देखाएकाे भए सचेत हुनुपर्ने बेला अाएकाे छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भक्तपुर वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानका क्रममा धेरै घरमा थाहै नहुनेगरी विद्युत् चुहावट भइरहेको फेला परेपछि कारबाहीकाे भागीदार हुनुपरेकाे छ।
उनले बाजेको पालादेखि अहिलेसम्म न्युनतम मात्रै विद्युत् खपत भइरहँदा पनि घरका मान्छेले वास्ता नगरेका कारण कारबाही भोग्नेको संख्या बढिरहेको बताए। घर पाँच छ तलाको भए पनि महसुल न्युनतम मात्रै देखाएकाले ती घर अनुसन्धानको घेरामा परेको उनले बताए। शंका लागेर त्यस्ता घरमा जाँच गर्दा वर्षौँदेखि विद्युत् चोरी भइरहेको भेटिएको श्रेष्ठको भनाइ रहेकाे समाचार अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ।
‘सन्नी हो नाम मेरो’ भन्दै नेपाली गीतमा यसरी नाचिन् सन्नी लियोनी
फोहोर पुनःप्रयोग, पर्यटकिय बजार सफा